YouTube bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu website n'ụwa nile nke na-eji ọrụ na nbudata na-ebugote videos na ha na-amasị. Ọ dị mfe bulite gị video ka YouTube ka megide nbudata a YouTube video. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ibudata gị video si YouTube naanị ịchọpụta na ọ bụ dakọtara na gị mgbasa ozi egwuregwu. Ụfọdụ online na offline converters nwere ike inyere gị dozie nsogbu ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Isiokwu a ga-elekwasị anya n'elu iri abụọ YouTube ka MP4 converters iji tọghata YouTube videos ka MP4 usoro.
Part 1, Top 10 Online YouTube ka MP4 Ntụgharị
Part 2, Top 5 YouTube ka MP4 Ntụgharị maka Mac na Windows
YouTube ka MP4 converters bụ n'oge dị online. Ọrụ kwesịrị nnọọ ekele maka nke a n'ihi na ha nwere ike tọghata ha YouTube videos ọ bụla chọrọ usoro. Ọtụtụ n'ime ndị online converters bụ free. Ndị a online converters nwere ike ịdị iche na akakabarede ọsọ, àgwà, bulite na ndị ọzọ na pụrụ iche atụmatụ.
Nke a bụ free YouTube ka MP4 Ntụgharị. Mgbe na-eji nke a Ntụgharị, nanị ihe na-mkpa ka ị mara bụ URL nke video na ị chọrọ iji tọghata. Mgbe ahụ, gị ọsọ ọsọ na YouTube URL ibudata gị video na mgbe na ị nwere ike tọghata gị video.
Weebụsaịtị URL: http://www.keepvid.com/
Chọọ n'elu internet.
Elu-ọsọ YouTube ka MP4 video akakabarede.
Akwado ọtụtụ video formats.
2. Clip Ntụgharị
Nke a bụ ihe online free ngwa na-enye gị ohere iji tọghata gị video faịlụ ka ọ bụla chọrọ usoro. Ọ nwere ike abuana ke akakabarede nke ma YouTube vidiyo na ọdịyo faịlụ. Ọ na-enye ihe nhọrọ nke converting videos site n'iji YouTube URLs.
Weebụsaịtị URL: http://www.clipconverter.cc/
Tọghata, download ma dekọọ YouTube videos.
High akakabarede ọsọ tụnyere ndị ọzọ online converters.
Dezie YouTube videos.
Họrọ àgwà nke gị video.
Ọtụtụ akakabarede mmepụta formats.
Ogo njigide nke converted videos.
3. Free File Ntụgharị
Nke a bụ ihe online YouTube ka MP4 Ntụgharị na-abịa na-achọsi ike atụmatụ na ị nwere ike na-achọ. Ọ nwere atụmatụ na-eme na ntughari nke YouTube videos mfe na a okwu nke sekọnd.
Weebụsaịtị URL: http://www.freefileconvert.com/
Na-enye ohere ntughari nke vidiyo si na ọtụtụ ndị ọzọ na saịtị.
Ntughari nke videos n'ime a dịgasị iche iche nke formats dị ka MP4, WAV, Flv, WMA, wdg
Nke a bụ free YouTube ka MP4 Ntụgharị na-enyere gị iji tọghata gị videos. Ọ bụ a free ọrụ, na e nweghị registration mkpa. Mgbe na-eji nke a online Ntụgharị, ọ bụghị a kwesịrị na ị ibudata video n'ihi na o nwere otu nhọrọ nke na-eji YouTube URL.
Weebụsaịtị URL: http://convert2mp3.net/en/
Gị faịlụ ga-azọpụta maka awa anọ na ihe nkesa.
Nwere ike tọghata videos si dị iche iche weebụsaịtị dị ka YouTube, Vevo, Clipfish na kwa ụbọchị ngagharị.
Ọtụtụ video formats akwado: MP4, AVI, WMV, 3GP
Nke a bụ free YouTube ka MP4 Ntụgharị na-enyere gị iji tọghata gị faịlụ ka chọrọ usoro. Nke a bụkwa nnọọ ike YouTube ka MP4 Ntụgharị n'ihi na ọ na-enye a ndokwa maka ojiji nke a YouTube URL.
Weebụsaịtị URL: http://www.cellsea.com/media/vindex.htm
Akwado online video akakabarede si ihe karịrị ise na isi mmalite YouTube gụnyere.
Easy ntughari nke YouTube videos.
Wide format nhọrọ.
Audio tracks mgbakwunye site na PC gị ma ọ bụ URL.
Resize gị videos.
6. Online Video Ntụgharị
Ị nwere ike iji nke a free YouTube ka MP4 Ntụgharị site na-ebugote a video site na PC gị ma ọ bụ jiri a URL si YouTube, mega video, agbaji na ndị ọzọ mgbe ahụ ị tọghata gị video ka FLV, 3GP, MP4 na ọtụtụ ndị ọzọ formats.
Weebụsaịtị URL: http://video.online-convert.com/
Agbanwe video size, video àgwà na audio mma.
Agbanwe eku ọnụego ma ọ bụ bee video.
Ọ nwere atụmatụ na-enyere aka obibi incompatibility mbipụta.
HD nkwado na ihuenyo grabs Njirimara.
Files mmakọ atụmatụ.
Mgbanwe nke video ka ìhè na iche.
7. Online Video Ntụgharị v3.0
Nke a bụ ihe online video Ntụgharị nke atọghata YouTube videos ndị ọzọ na-achọsi ike formats dị ka MP4 usoro. Nke a bụ free online ọrụ. Nke a Ntụgharị nanị na-anabata YouTube URL, ma ọ na-akwado ọtụtụ mmepụta formats. Ọ atọghata videos na a iji nwayọọ ọnụego.
Weebụsaịtị URL: http://www.onlinevideoconverter.com/video-converter
The video àgwà ẹnịm.
Download na tọghata videos.
Mkpebi mwube dị.
Control akụkụ ruru.
Akwado ọtụtụ video formats dị ka MP4, AVI, mpg, MOV, WMV, MKV, M4V, WEBM, Flv, 3GP.
8. YouTube Ntụgharị
Nke a bụ ọrụ na-enyere gị iji tọghata YouTube videos ka MP3, MP4, 3GP ma ọ bụ AVI online for free. Ya mere na njedebe ị ga-enwe ike na-ekiri ma ọ bụ na-ege ntị ọkacha mmasị gị YouTube tracks na-enweghị na-eweta a na-eri.
Weebụsaịtị URL: http://ytconv.net/
Ogbe download na ogbe tọghata.
Videos ibudatara YouTube na-aha ya amamihe.
Otutu akwado formats dị ka MP4, FLV na ọtụtụ ndị ọzọ.
Iji a video Ntụgharị, ị nwere ike tọghata video site na itinye URL gị video si ma YouTube, ezumike ma ọ bụ Dailymotion na kwa site na ndị ọzọ video nkekọrịta website.
Weebụsaịtị URL: http://www.zamzar.com/url/
High akakabarede ọsọ.
Dakọtara na iPhone.
YouTube faịlụ akakabarede ruo 100MB.
Nke a bụ free online YouTube ka MP4 Ntụgharị nke na-enyere na ntughari nke YouTube videos ọtụtụ mmepụta video formats dị ka 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, OGG, WEBM, WMV wdg a Ntụgharị kwesịrị ị ibudata YouTube video mbụ, na mgbe ahụ ị mara ya na Ntụgharị.
Weebụsaịtị URL: http://www.online-convert.com/
Fast na akakabarede site na otu usoro ọzọ.
Awade image, ebook na akwụkwọ akakabarede.
Dị iche iche isi iyi formats na-akwado.
Atọghata ọdịyo na video faịlụ.
Ị nwere ike ịchọta nnọọ ọtụtụ free online YouTube ka MP4 converters na ike ga-eji na nbudata na ntughari nke vidiyo si na-ewu ewu weebụsaịtị dị ka YouTube. Na akụkụ a nke isiokwu, top 10 free YouTube ka MP4 converters maka ma Mac na Windows ga-atụle.
Top 5 YouTube ka MP4 converters maka Windows
Nke a bụ a video Ntụgharị maka Windows na-eji iji tọghata YouTube videos ka MP4. Ngwaahịa a bụ maka free dị ka a ikpe version, Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ mma ọrụ na a dịgasị iche iche nke applicability, mgbe ahụ, ị ​​ga-ịzụta ya. Nke a software bụ dakọtara na windows 10/8/7 / XP / Vista.
3X ngwa ngwa mgbe tụnyere ndị ọzọ converters.
Full ndakọrịta na ndị ọzọ video formats.
Enyere wireless nyefe na-enweghị ojiji nke USB.
Ụka, dezie, welie na ibudata videos.
Nke a bụ otu n'ime ndị na-akasị ibudatara na-akasị ji free Downloader ma ọ bụ Ntụgharị. Ọ na-akpọkarị YTD. Ọ na-enye gị ohere ịgbanwe gị YouTube videos ka MP4. Windows OS 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2003 pụrụ ịkwado a ngwa.
Copy-pasting nke URL ọrụ awa.
Akakabarede nke mgbasa ozi faịlụ ka a dịgasị iche iche nke formats.
Fast na nbudata na ntughari nke faịlụ.
3. Freemake Video Ntụgharị 4.1.7
Nke a bụ software na-enye gị ohere iji tọghata YouTube videos ka MP4. Nke a software emewo meriri ọtụtụ dijitalụ enọ si award na-enye weebụsaịtị dị ka www.softpedia.com, www.lifehacker.com, wdg Nke a ngwa na-akwado site Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10.
Edezi nke obere vidiyo.
Ndepụta okwu na-akwado.
Adaba na ngwa ngwa akakabarede.
CD-ere ọkụ usoro.
Ngwugwu akakabarede Blu-ray usoro.
4. YouTube nwuchi
Nke a bụ free YouTube ka MP4 Ntụgharị, na ọ bụ ọtụtụ họọrọ ndị ọzọ n'ihi na nke ike ibudata a ogbe nke mgbasa ozi faịlụ. Nke a software ike ibudata ma ọ bụ bulite media faịlụ na ihe mụbara ijeụkwụ.
Nbudata ngwa ngwa na-efe ọsọ.
Mfe ime ihe na mfe ọrụ-interface.
Dịgasị iche iche media formats na-akwado.
Resize gị video.
5. Free MP4 Video Ntụgharị v5.0.1
Nke a bụ a na-agbanwe YouTube ka MP4 Ntụgharị. Ọ bụ free, na ọ bụ dakọtara na ndị ọzọ na-ewu ewu multimedia ngwaọrụ. Ọ na-akwado site na Windows 8, 7, Vista, XP SP3.
Nwere a onye ọrụ-enyi na enyi interface na ya mere mfe iji.
Easy mkpachapụ nke interface.
Fast akakabarede usoro.
Àgwà nke gị video anọgide n'otu.
A dịgasị iche iche nke media formats na-awa.
Top 5 YouTube ka MP4 converters maka Mac
1. Mac X Video Ntụgharị
Nke a bụ a YouTube ka MP4 Ntụgharị n'ihi na Mac na na-awa maka free, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta ụfọdụ n'ime ekpochi atụmatụ, ị ga-azụ ya legitimately.
Ojiji dị mfe ma fun.
Akpaka ntughari nke vidiyo si na-elekọta mmadụ weebụsaịtị-emetụta.
Multi-ọrụ nbudata nyeere.
Ọ dịghị adware ma ọ bụ spyware.
Ewepụtụ, akuku, kwukwara, sị watermark na mpụga sobtaitel gị video.
Hazie gị video mma.
Photo slide show nyeere.
Nke a bụ a video Ntụgharị maka Mac na-eji iji tọghata YouTube videos ka MP4. Ngwaahịa a bụ maka free dị ka a ikpe version, Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ mma ọrụ na a dịgasị iche iche nke applicability, mgbe ahụ, ị ​​ga-ịzụta ya.
3. Ọ bụla Video Ntụgharị
Ọ bụla Video Ntụgharị dị ka aha ya na-atụ aro bụ a software na na-eji na ntughari nke n'elu 60 ọsọ ọsọ formats ka chọrọ mmepụta formats. Nke a bụ kpam kpam free software.
Ogbe nhazi maka akakabarede n'ihi na otutu faịlụ.
Azọpụta niile converted faịlụ ka a ẹkedọhọde nchekwa.
Karịa 60 ọsọ ọsọ formats.
Download na tọghata YouTube videos.
Nke a bụ kpam kpam free ọrụ na-enyere gị aka iji tọghata gị YouTube videos ka MP4. Nke a bụ ọrụ dị maka Mac OS X 10.6-10.9.
Na-akwado nbudata nke YouTube listi ọkpụkpọ na a 3X ngwa ngwa ọsọ.
Na-akwado nbudata nke 4K videos.
Ikike na-egwu FLV videos n'ihi na ọ nwere wuru na-FLV ọkpụkpọ.
Nyefee gị videos site Wi-Fi na na na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Hazie gị YouTube videos na ala.
Dọwara ma wepụ Audio na Videos si CD.
Ọkụ vidiyo na DVD.
5. Clip jidere
Clip jidere bụ a free YouTube ka MP4 Ntụgharị n'ihi na Mac na-arụ ọrụ n'adabereghị si gị nchọgharị. Ọ nwere ike ikewapụ ya ime si nchọgharị mere na ọ na-adịghị na akpaaka ịchọpụta videos. Nke a Ntụgharị nwere ikike nke converting videos ka MPEG4, MP3, OGG Vorbis, OGG Theora na WMV. Ọ bụ a kpam kpam free YouTube ka MP4 Ntụgharị maka Mac.
Ngwa ngwa na pụrụ ịdabere na nbudata.
The video àgwà a nọgidere na-enwe.
Copy mado nke URL na-etinyere.
Nke a nwere ike ịbụ ihe kasị mma Ntụgharị Otú ọ dị, nke a akakabarede software na-emetụta nanị Intel Macs.
Ọtụtụ n'ime ndị online video converters pụrụ inyere gị aka ibudata ma ọ bụ tọghata gị videos na ala, ma ndị a online converters ghara izute gị mkpa ka afọ ojuju n'ihi na ndị a converters adịghị akwado nile di iche iche nke video formats, na ọbụna ụfọdụ n'ime ha nwere ike na-a ogologo oge na nbudata ma ọ bụ akakabarede gị YouTube videos. Ọzọkwa, ị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime online converters adịghị enye gị ohere iji idezi ma ọ bụ hazie gị videos. Ịtụle ihe ndị a niile bụ eziokwu, ọ bụ ihe amamihe nwere ndị a na-anọghị n'ịntanetị ngwa software na gị iji nweta mma arụmọrụ dị ka edezi na Personalization nke videos, nwee ọtụtụ video akwado formats na ngwa ngwa na nbudata na ntughari nke YouTube videos ka MP4. Isiokwu a ga-enyere gị aka ịmata nke software suut gị mma.
Olee otú iji tọghata VOB ka MP4 na Zero Ogo Loss na Windows na Mac
> Resource> MP4> 20 Free YouTube ka MP4 converters